Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Ismiidaamin Ah oo Ka Dhacay Dalka Nigeria.
Qarax Ismiidaamin Ah oo Ka Dhacay Dalka Nigeria.
Wararka laga helayo Dalka Nigeria ayaa sheegaya in ay qiyaastii 50 qof ku dhinteen gudaha Masjid ku yaala magaalada Mubi ee ku taalla Waqooyi Bari dalkaas.
Dad goob joogayaal ah ayaa saxaafada u sheegaya in markii uu qaraxu dhacay Jameecada Masaajidku ay u taagnaayeen gudashada Salaada Subaxa. Qof ka mid ahaa dadkii ku sugnaa Masjidka ayaa sheegay in ay la tahay in qofka is qarxiyay uu ka mid ahaa Jaameecadii Salaada ku jirtay.
Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay qaraxan ka dhacay gudaha Masjidka, laakiin inta badan qaraxyada ka dhaca Nigeria waxaa loo tiriyaa in ay ka dambeeyaan ururka Boko Haram ee ka dagaalama dalkaasi.
Boko Haram ayaa gudaha wadanka Nigeria kasameeyay qaraxyo badan oo ay dad kudhinteen waxayna ururku sheegeen in ay kasoo horjeedaan waxbarashada maadiga ah iyagoo qafaashay arday aad badan qaar kalana laayay.